Whitening दाँत सुझाव तपाईं आज आउट प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ! | सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
धेरै मानिसहरू किशोरीहरूको जस्तो सेतो दाँत बारे चिन्तित हुन थाल्छन्. तपाईंलाई यो चाहनुहुन्छ भने हुनत यो सपना सजिलै एक वास्तविकता बन्न सक्छ. तपाईं सबै भन्दा राम्रो प्रविधी बाहिर त्यहाँ राम्रो सल्लाह सिक्ने र निम्न द्वारा सेतो दाँत सक्छ. यहाँ प्रस्तुत गरिएको जानकारी तपाईं whitest दाँत सम्भव भन्नेछु.
सुर्ती टाढा रहन, कफी, र रक्सी. यी प्रत्येक पालन र आफ्नो दाँत discolor कि रसायन समावेश. तपाईं कम वा यी कुनै पनि आफ्नो खपत हटाउन अनिच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई उपभोग पछि त तपाईं आफ्नो दाँत लिंदा गर्नुपर्छ. त्यहाँ अब मिनी औंला उपलब्ध ब्रश दाँत क्षेत्रमा घर्षण उज्यालो प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने हो. यी के तपाईं पूरा समय संग एक टूथब्रश भएको एक सजिला वैकल्पिक हुन सक्छ. यो ब्रश गरेको खुरदरापन के तपाईंको दाँत सफा हुन्छ छ.
टिप! यस्तो रातो दाखमद्य रूपमा पेय, कफी र सोडा पानी एक गिलास संयोजनमा खपत गर्नुपर्छ. केही पेय पदार्थ दाँत discolor धेरै छिटो हो, र तिनीहरूलाई नियमित पिउने staining हुन सक्छ.
तपाईं दाँत कार्यक्रम को कुनै पनि whitening, मा के गर्नुपर्छ पहिलो कुरा तपाईं पेशेवर cleanings प्राप्त सुनिश्चित छ. आफ्नो दाँत पेशेवर हरेक छ महिना साफ र आफ्नो वर्तमान सफाई लागि कार्यालयमा गर्दा आफ्नो अर्को नियुक्ति बनाउन.
तपाईं खाने वा पिउने गर्दा आफ्नो दाँत दागरहित बनाइन्छन् पछि धेरै होसियार हुनु आवश्यक छ. दाँत तिनीहरूले दागरहित बनाइन्छन् भएपछि दाग बढी सम्भावना हुनेछ. तपाईं आफ्नो दाँत सेतो पछि गाढा रंग छ कि खाद्य पदार्थ स्पष्ट हुनको लागि प्रयास. कफी, उदाहरण को रुपमा, एक संभावित दाग-पैदा पेय को एक उदाहरण ठीक आफ्नो दाँत गर्न susceptible हुनेछ भन्ने छ.
टिप! प्राकृतिक दाँत whitener रूपमा स्ट्रबेरी प्रयोग. स्ट्रबेरी पाइने प्राकृतिक यौगिकों रसायन प्रयोग बिना दाँत सेतो हुनेछ.
तपाईंको दाँत whitening उत्पादनहरु एक संवेदनशीलता विकास हुन सक्छ. यो सधैंभरि चोट सक्छ, तर यो अझै पनि धेरै दुख्छ. उत्पादन प्रयोग रोक्न र सकेसम्म चाँडो आफ्नो दन्त चिकित्सक हेर्न जाने. उहाँले उत्पादन को एक प्रकार को सिफारिश सक्ने बाटो आफ्नो दाँत प्रभावित हुने छैन.
टिप! पूर्ण उपचार सुरु गर्नु अघि घर whitening, उत्पादनहरु को निर्देशन पढ्नुहोस्. यसो गर्दा बस मसूडों inflamed हुन कारण हुनेछ, मुख रिसले हुन, र आफ्नो दाँत क्षतिग्रस्त गर्न.
फल दाँत whiteners सेतो ठूलो र प्राकृतिक तरिका हो. उत्कृष्ट फल को एक जोडी उदाहरणहरू दाँत सेतो गर्न सक्ने सुन्ताला र सुन्ताला छन्. तपाईं पनि आफ्नो दाँत को सतह विरुद्ध एक सुन्तला बोक्रा प्रयोग गर्न.
Mouthwash सास freshens र gingivitis हुन सक्छ कि जीवाणुहरू हत्या; तर, mouthwash केही प्रकारका आफ्नो दाँत discolor गर्न सक्नुहुन्छ. छ कि छैन कठोर एक mouthwash प्रयोग र निश्चित यसलाई एक उज्ज्वल रंग छैन.
टिप! आफ्नो दाँत एक बिट सेतो गर्न एउटा अचम्मको तरिका प्राकृतिक स्ट्रबेरी प्रयोग मार्फत छ. मान्छे धेरै वर्ष को लागि एक घर whitener रूपमा स्ट्रबेरी प्रयोग गरेका छन्.
नियमित टूथपेस्ट र टूथपेस्ट दांत धेरै फरक छैन. गिरने महंगा उत्पादनहरु काम नगर्नुहोस् लागि जोगिन. तपाईं बस पैसा टाढा tossing गरिनेछ.
तपाईंले केही पेरोक्साइड र बेकिंग सोडा संग आफ्नो whitening, टूथपेस्ट बनाउन सक्छ. यो पेस्ट लिंदा अघि पाँच दस मिनेट को लागि आफ्नो दाँत को porous सतह भित्र पस्नु गर्न अनुमति दिनुहोस्. कठोर आफ्नो दाँत माझ्छु छैन, यसलाई आफ्नो मसूडों रिस मा एक हात हुनेछ.
टिप! होसियार हुनुहोस् र निर्देशित रूपमा ठीक whitening, उत्पादनहरु दाँत प्रयोग. उत्पादनहरु दांत दाँत दाँत तामचीनी मा एक संक्षारक वा हानिकारक प्रभाव पार्न सक्छ, गिजा र पनि स्नायु.
Whiter दाँत सेतो रहन प्राप्त गर्ने एउटा तरिका नियमित दन्त cleanings सेट अप गर्न छ.
तपाईंको मुस्कान रोशन एक सुविधाजनक बाटो बस एक दांत टूथपेस्ट संग आफ्नो वर्तमान टूथपेस्ट प्रतिस्थापन गर्न छ. यो टूथपेस्ट विशेष दाग र पट्टिका हटाउन formulated छ यो whitens रूपमा. लामो समय भन्दा, तपाईं Whiter दाँत र कम दाग देख्ने.
टिप! crowns आफ्नो प्राकृतिक दाँत भन्दा फरक पदार्थ हो कि सम्झना, र दाँत whiteners प्रतिक्रिया छैन. जब तपाईं मुस्कान आफ्नो crowns देख्न सकिन्छ भने आफ्नो दाँत Whitening एक असमान रंग प्रस्तुति हुन सक्छ.
तपाईंले तिनीहरूलाई सेतो दाँत हुन चाहनुहुन्छ भने दाँत-staining पेय पदार्थ जोगिन. यी पेय पदार्थ केही उदाहरणहरू कफी समावेश, कफी र परम्परागत चिया. के तपाईं यी पिउन रूपमा staining जोगिन गर्न चाहनुहुन्छ भने, staining कम गर्न आफ्नो पेय को sips बीच पानी sipping विचार.
आफ्नो दाँत दांत उपचार दुखाइ वा संवेदनशीलता गराउँछ भने रोक्न. Whitening उत्पादनहरु कहिलेकाहीं संवेदनशीलता वृद्धि र सुनिंनु हुन सक्छ. यो हुन्छ भने, तुरुन्तै whitener प्रयोग गर्न बन्द, र संवेदनशील दाँत लागि उपयुक्त हुनेछ भन्ने फरक उत्पादन बारे आफ्नो दन्त चिकित्सक कुरा.
टिप! पीछा पेय पानी दाग ​​कारण छ कि. तपाईं अँध्यारो तरल पछि केही पानी हुँदा (कफी, चिया, पप, आदि.
चाँडै आफ्नो दाँत रोशन वा Whiter दाँत को उपस्थिति छ एउटा स्याउ खान. Crunchy खाद्य पदार्थ र तरकारी आफ्नो तामचीनी मा धेरै क्षति बिना तपाईं आफ्नो दाँत सफा गर्न मद्दत गर्न सक्ने घर्षण गुणस्तर छ.
आफ्नो दाँत सेतो मदत गर्न घरमा उपयोग गर्न सकिन्छ कि एक जेल लागि आफ्नो दन्त चिकित्सक सोध्न. यो विधि जेल भरिएको छ कि एक mouthpiece को तयारी पनि समावेश. तपाईं दुई वा तीन हप्तासम्म प्रत्येक रात समय को एक निश्चित रकम लागि यो लगाउने. तपाईंको दाँत यो दृष्टिकोण प्रयोग गरेर धेरै आठ रूपमा रंग Whiter हुन सक्छ.
टिप! दन्त चिकित्सक भ्रमणमा Whiter दाँत प्राप्त गर्न आवश्यक हो. आफ्नो जीवन मा निर्धारित cleanings निर्माण Whiter दाँत गर्न महत्वपूर्ण छ.
कुनै पनि दांत उपचार प्रयोग गरेर आफ्नो दाँत संवेदनशील बन्न तपाईं संवेदनशीलता महसुस भने रोक्न. तपाईं आफ्नो दाँत गर्न वास्तविक क्षति कारण हुन सक्छ देखि तपाईं आफ्नो दन्त चिकित्सक सल्लाह परामर्श गर्नुपर्छ. तपाईंले यसलाई दाँत को whitening, आउँदा विकल्प के तपाईं को लागि सबै भन्दा राम्रो हो बाहिर आंकडा आफ्नो दन्त चिकित्सक कुरा गर्नुपर्छ.
आफ्नो दाँत लिंदा दैनिक तिनीहरूलाई स्वस्थ राख्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो, र तिनीहरूलाई cavities सुरक्षित, र भद्दा staining. आफ्नो दाँत को उपस्थिति सुधार ठूलो तरिका छ एक दांत टूथपेस्ट प्रयोग गर्न. त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, त्यसैले केही अनुसन्धान गर्न, र यो तपाईं आफ्नो आवश्यकता लागि सबै भन्दा राम्रो whitening, टूथपेस्ट फेला पार्न मद्दत गर्नेछ.
टिप! तपाईं आफ्नो सास बारेमा थप विश्वस्त छन् भने तपाईंले आफ्नो मुस्कान बारेमा थप विश्वस्त हुन छौँ. आफ्नो पाम चाट (पहिलो आफ्नो हात धुन!) तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ सास खराब छ वा छैन भने.
तपाईं एक ठूलो smile.Food र पेय आफ्नो दाँत मा निर्माण र discolor वा केही समय पछि उनलाई दाग सक्छ छन् नियमित भने आफ्नो दाँत माझ्छु. के तपाईं नियमित दाँत-लिंदा तालिका नियमित कायम भने आफ्नो दाँत को discoloration चिन्तित हुनेछैन.
नियमित रूपमा आफ्नो दाँत flossing महत्त्व सम्झना. Flossing आफ्नो दाँत भित्र मलबे हुन्छ र पट्टिका झगडे, जो discoloration गराउँछ. तपाईं प्रत्येक भोजन पछि flossing आफ्नो दाँत दिनुपर्छ; तपाईं घर टाढा खान गर्दा floss तपाईं यसलाई पूरा गर्न सक्ने पर्याप्त पोर्टेबल छ. तपाईं रात मा सुत्न जाने अघि, यो तपाईं आफ्नो मुख मा उपस्थित हुन सक्छन् कि बुरा ब्याकटेरिया को छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर आफ्नो दाँत floss धेरै महत्त्वपूर्ण छ.
टिप! कफी, चिया, कोला र अन्य गाढा रंग पेय आफ्नो आफ्नो whitest दाँत राख्न. यी पेय पदार्थ प्रत्येक आफ्नो दाँत discolored बन्न कारण हुनेछ.
तपाईं आफ्नो दाँत दागरहित बनाइन्छन् भयो पछि केही दिनको लागि मात्र स्पष्ट पेय पदार्थ पिउन.
पेय मा तल काटन, यस्तो सोडा पप वा रक्सी रूपमा, तपाईं Whiter दाँत छ मदत गर्नेछ. किनभने सोडा र रक्सी आफ्नो दाँत दाग सक्छ, तपाईं दुवै को कम पिउने द्वारा सेतो मुस्कान रक्षा गर्न सक्छन्. तपाईंले तिनीहरूलाई हुनुपर्छ भने, हुनत, तिनीहरूलाई खपत पछि सकेसम्म चाँडो आफ्नो दाँत माझ्छु. यो पनि तिनीहरूलाई नराम्ररी दाँत दाग सानो समय दिनेछु.
टिप! आफ्नो दाँत Whiter प्राप्त गर्न, तपाईं एक ओखर रूख देखि छाल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो दाँत मा यो दल्नु राम्ररी तिनीहरूलाई सफा र तिनीहरूलाई Whiter बनाउँछ.
यसले थप लागत एक विधि हो, तर यो द्रुत परिणाम दिन्छ.
दुग्ध पदार्थ को ठूलो परिमाणमा खपत. डेयरी उत्पादन खनिज छ, यस्तो क्याल्सियम रूपमा, आफ्नो दाँत स्वस्थ देख राख्नेछ. आफ्नो दाँत को तामचीनी बलियो र discoloration कम susceptible हुनेछ. तपाईं आफ्नो आहार मा यी खाना प्रकार समावेश जब तपाईं आफैलाई एक Whiter मुस्कान दिन.
टिप! एक बेकिंग सोडा संग आफ्नो दाँत ब्रश र पेरोक्साइड तिनीहरूलाई सेतो गर्न पेस्ट. दुवै सामाग्री सामान्यतः टूथपेस्ट दांत प्रयोग गरिन्छ, र अधिकांश मानिसहरू आफ्नो घर राख्न.
आफ्नो दाँत लागि एक प्राकृतिक स्क्रबर रूपमा कार्य गर्न सक्छन् तरकारी र fibrous बनावट हो कि फल खान. विचार गर्न खाद्य पदार्थ केही उदाहरणहरू स्याउ समावेश, स्याउ, ककडी र गाजर. अधिकतम प्रभाव प्राप्त गर्न crunchy खाना अप चपाउनु आफ्नो सबै दाँत प्रयोग.
तपाईं यसलाई मदत गर्न सक्छ भने सिगार वा चुरोट धूम्रपान छैन. यी दुवै दाँत को एक discoloration कारण जानिन्छ. धूम्रपान छोडने दाँत को पहेंलो रोक्न मद्दत गर्नेछ. त्यहाँ प्रभावकारी तपाईं एक डाक्टर जाने यदि तपाईं धूम्रपान अन्त्य गर्न मद्दत दबाइहरु छन्. तपाईं उचित सल्लाह र सहयोग हुनुपर्छ.
सबैभन्दा मानिसहरू Whiter दाँत थियो इच्छा. समस्या भनेर भन्दा मानिसहरू आफ्नो दाँत सेतो गर्न सक्ने विश्वास छैन छ, त्यसैले तिनीहरू कहिल्यै पनि प्रयास. यस लेखमा देखि सुझाव र चाल निम्न तिमी धेरै सानो समयमा सुन्दर सेतो दाँत दिनेछु.
विभाग: घर आधारित सेतो दाँत गर्न ट्याग: सेतो दाँत, दाँत सुझाव Whitening, Whitening दाँत सुझाव तपाईं आज आउट प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ!